भिडिओ – Page2– mero sathi tv
११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १५:२३ February 23, 2018
LeaveaComment on आँचलको रुवाबासि शत्रु गतेसंग किन मन दुख्यो ?
स्टार नायक पल शाहको आज (बुधबार) जन्मदिन हो । युवा युस्ताका ढुकढुकी पललाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले जन्मदिनको कामना दिइरहेका छन् । कम उमेरमै स्टार बनेका पल को हुन् र कहिले बाट बने चर्चित ? हामीले छोटकरीमा पललाई नजिकबाट नियालेका छौं । पलको जन्मदिनमा डाँको छोडेर रोइन् आँचल
१० फाल्गुन २०७४, बिहीबार १३:३८ February 22, 2018
by sumin sunar
LeaveaComment on ‘बाघी २’ ट्रेलरः टाईगरको एक्शन अवतार
अहमद खानले निर्देशन गरेका फिल्म ‘बाघी २’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यो फिल्म मार्च ३० मा रिलिज हुने भएको छ । साजिद नाडीयडवाला निर्माता रहेको फिल्ममा टाइगरसँगै मनोज बाजपाई, रणदीप हुड्डा, दिशा पटानी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । यो फिल्मको पहिलो पार्ट ‘बाघी’मा टाइगरको साथमा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर देखिएकी थिइन् भने बाघी २ […]
दयाहाङ स्टार ‘नेप्टे’ को ‘दिल रानी’ बोलको क्लब गीत सार्वजनिक
१० फाल्गुन २०७४, बिहीबार १२:४३ February 22, 2018
LeaveaComment on दयाहाङ स्टार ‘नेप्टे’ को ‘दिल रानी’ बोलको क्लब गीत सार्वजनिक
फिल्म ‘नेप्टे’ को ‘दिल रानी’ बोलको क्लब गीत सार्वजनिक भएको छ । चैत ३० गतेलाई प्रदर्शन मिति कन्फर्म गरिएको फिल्मको गीतमा सन्तोष राजको संगीत, उदित नारायण झा र सेलिना कुँवरको स्वर रहेको छ । गीतको भिडियोमा नायक रोहित रुम्बा र नायिका छुल्ठिम गुरुङ्ग फिचरिङ छन् । गीतमा यमनाथ मैनालीका शब्द छन् भने कबिराज गहतराज कोरियोग्राफर […]
नेपालीको अर्को सफलताः तनहुँका विष्णु साउथ इण्डियन फिल्मको मुख्य ‘हिरो’, हेर्नुहोस् ट्रेलर
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार ११:५७ February 19, 2018
LeaveaComment on नेपालीको अर्को सफलताः तनहुँका विष्णु साउथ इण्डियन फिल्मको मुख्य ‘हिरो’, हेर्नुहोस् ट्रेलर
नेपाली युवाहरुले एकपछि अर्को सफलता पाउन थालेका छन् । नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने संसारकै प्रतिष्ठित लिग आइपिएलमा छनोट भएर तारिफ बटुलिरहेका बेला अर्का नेपाली युवा सिने क्षेत्रमा चम्किएका छन् । बलिउडलाई टक्कर दिने दक्षिण भारतीय तेलुगु फिल्ममा नेपाली युवा मुख्य भूमिकामा देखिँदैछन् । तनहुँमा जन्मिएर ३ वर्षको उमेरमै भारत पुगेका युवा विष्णु अधिकारी अहिले […]
कस्तो छ कृ ? यस्तो हुदा पनि अनमोल तनाबमा !
२८ माघ २०७४, आईतवार १३:१८ February 11, 2018
LeaveaComment on कस्तो छ कृ ? यस्तो हुदा पनि अनमोल तनाबमा !
अभिनेता भुवन केसीका छोरा हुन् अनमोल । तर, अब उनलाई भुवनको नामले चिनाइरहनु पर्दैन । ‘होस्टेल’, ‘जेरी’, ‘ड्रिम्स’ र ‘गाजलु’ फिल्मले उनलाई सुपरस्टार अभिनेताका रूपमा स्थापित गराइसकेको छ । ‘साथी म तिम्रो’ फिल्मबाट डेब्यू गरेका उनी युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय छन् । शुक्रवारबाट २ वर्षपछि पर्दामा फर्किएका अनमोल स्टारर फिल्म ‘कृ’ देशैभर रिलिज भयो । […]
आफ्नो बिहेको बारेमा नायिका श्वेताले मुख खोलिन्, सबैलाई निम्ता दिदै श्वेता (भिडियो)
२३ माघ २०७४, मंगलवार १६:१४ February 6, 2018
भिडिओ, मनोरन्जन, मेरो साथी टि भी
LeaveaComment on आफ्नो बिहेको बारेमा नायिका श्वेताले मुख खोलिन्, सबैलाई निम्ता दिदै श्वेता (भिडियो)
पोखरा । नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह गरे लगत्तै एकल महिला बन्न पुगेकी नायिका श्वेता खड्का विवाह बन्धनमा बाँधिने मनस्थितीमा पुगेकी छिन् । काभ्रेको पनौतीमा जन्मिएकी श्वेता संघर्ष गर्दै चलचित्र क्षेत्रमा आएकी हुन् । नायिका खड्काले निर्माण गरेको चलचित्र ‘कान्छी’ आउँदो फागुन ४ गते प्रदर्शनमा आउँदैछ । चलचित्रको बिषयमा ठट्यौली पाराले बोल्दै सम्पूर्ण दर्शकलाई कान्छीको बिहे […]
माया पुनको लिरिकल भिडियो ‘झ्याउकिरी’लाई मनपराए दर्शकले
१८ माघ २०७४, बिहीबार १५:३७ February 1, 2018
LeaveaComment on माया पुनको लिरिकल भिडियो ‘झ्याउकिरी’लाई मनपराए दर्शकले
गायिका माया पुनको हालसालै साबजनिक लोक पप गीतको लिरिकल भिडियो ‘झ्याउकिरी’लाई दर्शकले अत्यन्त मन पराएका छन् । जनवरी २२ तारिखमा आफ्नै (माया पुन) युट्युब अकाउन्टमा अपलोड गरिएको झ्याउकिरी एक साताको अबधिमा यो समाचार तयार पार्दासम्म ५९ हजार ९ सय पटक हेरिएको छ । गायिका स्वयंको शब्द र संगीत रहेको उक्त गीतलाई रिकेश गुरुङले एरेन्ज गरेका हुन् । गीतमा […]
अरुको श्रीमतिलाई लालटिन बालेर अंधेरीमा कुरेका पुस्कलले रुवाए सबैलाई
१५ माघ २०७४, सोमबार १६:४९ January 29, 2018
भिडिओ, मेरो साथी टि भी
LeaveaComment on अरुको श्रीमतिलाई लालटिन बालेर अंधेरीमा कुरेका पुस्कलले रुवाए सबैलाई
पोखरा । छिल्लो समय चर्चाको शिखरमा रहेका लोक तथा दोहोरी गायक, आफैमा नायक पनि हुन् पुस्कल शर्मा । बिशेषत बियोगान्त गीतमा उनले स्वर दिएका छन् भने उनका गीतहरु पनि निकै चलेका छन् । कहिले पुष्कल शर्मा मरेको खबर लिएर गीतमार्फत आउँछन् त कहिले मुटु जलाएको कुरा लिएर आउँछन् । पोखरामा जारी रहेको सफल राष्ट्रिय औद्योगिक […]
अन्तरवार्तामा भावुक बन्यो भिमफेदि गाइज
१३ माघ २०७४, शनिबार १४:१८ January 27, 2018
LeaveaComment on अन्तरवार्तामा भावुक बन्यो भिमफेदि गाइज
पोखरा । केहि वर्ष यता नेपालमा पनि आ आफ्नै समुहमा डान्स गुप बनाउने देखि कभर भिडियो बनाएर युटुबमा राख्ने चलन बढेको छ । केहि त प्रतियोगिता पनि हुने गरेको पाइएको छ । आफ्नै परिवेशको नामलाई विश्व सम्म पु¥याएको डान्स गुप भिमफेदिको पनि कथा अनि बाध्यताहरु त्यस्तै जुन अरुको भन्दा केहि फरक छैन हेर्नुहोस भिमफेदि गाईजसंग […]
धुर्मुस सुन्तलीले बनाएको बस्तिमा टिम सहित पुगे रबि
५ माघ २०७४, शुक्रबार ११:४४ January 19, 2018
LeaveaComment on धुर्मुस सुन्तलीले बनाएको बस्तिमा टिम सहित पुगे रबि
पोखरा । जनताका भगवान जस्तै मानिएका ३ सच्चा देश भत्त रबि लामिछाने र धुर्मुस सुन्तली एकै भिडियोमा देखिएका छन । धुर्मुस सुन्तलीले बनाएको सन्तपुर नमुना बस्तीमा पुगेका रबिले धुर्मुस सुन्तलीको खुलेर प्रसंसा गरेका छन् । हेर्नुहोस भिडियोमा के भने त तीनै जनाले ।